Nay Paing – Rocket Online Shopping
Posts by Nay Paing
Home Author Nay Paing
About Nay Paing
Nay Paing has contributed 34 entries to our website, so far.
2011 က ထွက်ထားတဲ့ ကိုးရီးယား Thriller ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် Triller ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ အသည်းနုသူများ မကြည့်သင့်ပါ။ eye for eye tooth for tooth ကြောင့် ဘယ်လိုအမှားတွေထပ်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသကြောင့် အကျိုးရှိတာ ဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမဲ့တာက ပိုများမှာ ဖြစ်ပါတယ် လူသတ်သမားကို ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမလဲ ဆိုတောတော့…. အပြာရောင်စာလုံးတွေနှိပ်လို့ရပါသည်။ Download...
ကမ္ဘာမြေညီ နောက်ဆုံးချိန်ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ရင် ဘယ်လို အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ ပုံဖော်သွားပါတယ် လူ့ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်၊ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတွေကို ကာကွယ်ပေးချင်စိတ် စသဖြင့် သိပ္ပံလွန် ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ Download Now Download မဆွဲခင် page မှာ အီးမေးလ် လာပေးဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
ရှေ့နေတစ်ယောက်ရဲ့ တရားခွင် လျှောက်ထားမှုများကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲသား ဘဝနဲ့ သူငှေးတွေရဲ့ ကွာခြားတဲ့ ဘဝတွေကိုလည်း သေသေချာချာ ရိုက်ကူးထားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ india ရဲ့ အယူအဝါဒ တွေ india ရဲတွေရဲ့ လာဘ်စားမှု တွေ အမှုဖျောက်မှုတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အမှုတစ်ခုကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာကိုတော့ click to download...
Myanmar Subtitle Download Websites and Football live
Myanmar Subtitle Download Websites (Original) မြန်မာစာတန်းထိုး Website များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Channel Myanmar Msubmovie mmsubtitles Gold Channel Burmese Subtitle AlphaPrimium mmfilm.org တခြား Website များရှိသေးရင် Comment မှာ ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ AsiaTv Myanmar Subtitle Copy Websites...
Google Account Security Account လုံခြုံရေးဟာဆိုရင် လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူတော်တော်များများဟာ Gmail အကောင့်ကို Personal အတွက်သုံးသလို လုပ်ငန်းအတွက်လည်း သုံးကြပါတယ်။ Fb နဲ့ ချိတ်ထားကြတယ်။ ဘဏ်တွေနဲ့ ချိတ်ထားကြတယ်။ ဒီအတွက်​ကြောင့် Gmail ရဲ့ လုံခြုံရေးဟာဆိုရင် အရေးကြီးပါတယ်။ ၁။ Password တစ်ခုတည်း မသုံးပါနဲ့Gmail အကောင့်ကို...
Protected: How to Advertise on Facebook 1
How to open developer option
How to open developer option Developer Option ကို Otg keyboard နဲ့ HDMI cable အတွက် ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး မတူပါ။ Mi ဖုန်းအတွက် Developer Option ဖွင့်နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်။ Mi မှာဆိုရင် OTG setting မပါပါ၊ Auto...
How to Create Business on Google Map
How to Create Business on Google Map Rocket ရဲ့ စျေးဝယ်သူများမှာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များစွာ ရှိပါတယ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ Google map မှာ လိပ်စာ ထည့်ထားပါက ကောင်းကျိုးများစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ် ၁။ Grab getride နဲ့ fastgo မှာ ပေါ်ခြင်း Ride sharing...
How to create Gmail Account Email အကောင့်ဟာဆိုရင် များစွာ အသုံးဝင်ပါတယ် Facebook အကောင့်လျောက်ခြင်း Drive storage ရခြင်း စာများလက်ခံခြင်း ဓာတ်ပုံများ Cloud ပေါ်မှာ သိမ်းနိုင်ခြင်း စသဖြင့် များစွာ အသုံးဝင်လှပါတယ် အသုံးဝင်လှတဲ Email ကို Google က Free Mail ပေးထားပါတယ်...
How to Download From Channel Myanmar
How to Download From Channel Myanmar အိမ်မှာ အားလုံး lock down ဖြစ်နေတော့ Rocket ရဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် CM ကနေ Download ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် Operator တွေကလည်း စျေးလျော့ပေးတော့မှာဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ Why Google Device? Google Device က Down...
Sport Bluetooth Earphone ( Promotion Items ) Ks24,000.00 Ks9,000.00
VR Camera (မ်က္ႏွာျကက္ ကင္မရာ) no router Ks20,000.00 Ks15,000.00
YES Hair Removal Ks29,000.00 Ks15,000.00
X5 Slimming Belt Ks20,000.00 Ks13,000.00
Magic Leverage or Beauty of Hair Ks8,000.00 Ks4,000.00
Derma Wand Ks29,000.00 Ks19,000.00